ဒီအသင်းတွေကို ဘာစီလိုနာ တစ်ခါမှ မနိုင်ခဲ့ဘူးတာက အံ့သြစရာပါပဲ
ဥရောပမှာ ဘာစီလိုနာ အနိုင်မရဖူးသေးတဲ့ ပြိုင်ဘက်အသင်းများ
31 Oct 2018 . 4:42 PM
ဘာစီလိုနာဆိုတာက ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးစာရင်းဝင် အသင်းတစ်သင်း။ ၂၁ ရာစုအတွင်း ချန်ပီယံလိဂ်(၄)ကြိမ်အထိ ရယူခဲ့ပြီး အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို (၅)ကြိမ်အထိ ဆွတ်ခူးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အသင်းဖြစ်ပါစေ၊ အားနည်းချက်ကတော့ ရှိစမြဲပဲ။ ဥရောပမှာ ဘာစီလိုနာ မနိုင်ဖူးတဲ့အသင်းတွေရှိတယ်ဆိုရင် ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်သွားမလား။ ဥပမာ Slovan Bratislava ၊ ဆော်ပေါ်လိုအသင်းတွေနဲ့ ဘာစီလိုနာ တစ်ကြိမ်သာ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး အဲဒီပွဲတွေမှာ ဘာစီလိုနာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဥရောပမှာ ဘာစီလိုနာအသင်း အနိုင်မရဖူးသေးတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီအသင်းတွေက ဘယ်အသင်းတွေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် . . .
CSKA မော်စကို (2 games – 1 draw, 1 win for CSKA)
ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ၁၉၉၂-၉၃ ဥရောပဖလား(ချန်ပီယံလိဂ်) ဒုတိယအဆင့်မှာ CSKA မော်စကိုနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး အိမ်ကွင်းမှာ (၂-၃)ဂိုးနဲ့ ရှုံး၊ အဝေးကွင်းမှာ (၁)ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဒီနှစ်သင်း မဆုံတွေ့တော့ဘဲ အခုအချိန်ပြန်တွေ့ရင်တော့ ဒီမှတ်တမ်းဆိုးကို ဘာစီလိုနာ ချိုးဖြတ်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါလိမ့်မယ်။
နော်တင်ဟမ်ဖော်ရက်စ် (2 games, 1 draw, 1 win for Forest)
အခု အင်္ဂလန်လိဂ်ချန်ပီယံရှစ်မှာ ရုန်းကန်နေရတဲ့ နော်တင်ဟမ်ဖော်ရက်စ်အသင်းဟာ တစ်ချိန်က ဥရောပမှာ ကြီးစိုးခဲ့ဖူးတဲ့ အသင်းတစ်သင်းဆိုရင် ပရိသတ်တွေ အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။ ဥရောပဖလား (ချန်ပီယံလိဂ်)ကို ၁၉၇၈-၇၉ ၊ ၁၉၇၉-၈၀ (၂)ရာသီဆက် ရယူခဲ့ပြီး လီဗာပူးလ်နောက်ပိုင်း ဥရောပဖလားကို (၂)ကြိမ်ဆက် ရယူခဲ့တဲ့ ဒုတိယအင်္ဂလန်အသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ၁၉၈၀ ဥရောပစူပါဖလားပွဲအဖြစ် နော်တင်ဟမ်ဖော်ရက်စ်နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး အိမ်ကွင်းမှာ (၁)ဂိုးစီသရေ၊ အဝေးကွင်းမှာ (၁-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ နော်တင်ဟမ်ဖော်ရက်စ်က အခုအချိန်မှာ ချန်ပီယံလိဂ် ၀င်ဖို့ နေနေသာသာ၊ ပရီးမီးယားလိဂ်တောင် တန်းမတက်တာ ကြာပြီဖြစ်လို့ ဒီမှတ်တမ်းဆိုးကို ဘာစီလိုနာ ရင်နာနာနဲ့ပဲ ဆုပ်ကိုင်ထားရဦးမှာပါ။
ဒန်ဒီးယူနိုက်တက် (2 games,2wins for Dundee Utd)
တစ်ချိန်က ဆဲလ်တစ်အသင်းနဲ့အတူ ဥရောပမှာ ခြေစွာခဲ့တဲ့ စကော့တလန်ကလပ် ဒန်ဒီးယူနိုက်တက်အသင်းကလည်း ဘာစီလိုနာ မနိုင်ဖူးသေးတဲ့အသင်းတစ်သင်းပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက သူတို့နဲ့ (၄)ကြိမ်အထိ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး သရေတောင် မရှိဘဲ ပွဲတိုင်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ ၁၉၆၆-၆၇ UEFA (ယူရိုပါလိဂ်) ဒုတိယအဆင့်မှာ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ဒန်ဒီးအသင်းက အိမ်ကွင်း (၂-၀)ဂိုး၊ အဝေးကွင်း (၁-၂)ဂိုးတွေနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ၁၉၈၆-၈၇ ရာသီ UEFA ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ ထပ်တွေ့တော့လည်း ဒန်ဒီးက (၁-၀)၊ (၁-၂)ဂိုးတွေနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြန်တယ်။
အသင်းတစ်သင်းဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲ ကြီးကျယ်ခမ်းနားနေပါစေ၊ သူတို့ဟာ Unbeatable Team မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဒါက သက်သေပါပဲ။ ဒါကြောင့် Akhayar Sports ပရိသတ်တွေ ဗဟုသုတရဖို့ ဒီ Article ကို ဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
Photo:Futbolgrad,Pinterest,Evening Telegraph,Getty Images
ဥရောပမှာ ဘာစီလိုနာ အနိုငျမရဖူးသေးတဲ့ ပွိုငျဘကျအသငျးမြား
ဘာစီလိုနာဆိုတာက ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံးစာရငျးဝငျ အသငျးတဈသငျး။ ၂၁ ရာစုအတှငျး ခနျြပီယံလိဂျ(၄)ကွိမျအထိ ရယူခဲ့ပွီး အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို (၅)ကွိမျအထိ ဆှတျခူးခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘယျလောကျပဲ ကွီးကယျြခမျးနားတဲ့အသငျးဖွဈပါစေ၊ အားနညျးခကျြကတော့ ရှိစမွဲပဲ။ ဥရောပမှာ ဘာစီလိုနာ မနိုငျဖူးတဲ့အသငျးတှရှေိတယျဆိုရငျ ပရိသတျတှေ အံ့အားသငျ့သှားမလား။ ဥပမာ Slovan Bratislava ၊ ဆျောပျေါလိုအသငျးတှနေဲ့ ဘာစီလိုနာ တဈကွိမျသာ ဆုံတှခေဲ့ပွီး အဲဒီပှဲတှမှော ဘာစီလိုနာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။ အဲဒီလိုပဲ ဥရောပမှာ ဘာစီလိုနာအသငျး အနိုငျမရဖူးသေးတဲ့ ပွိုငျဘကျတှေ ရှိခဲ့တယျ။ အဲဒီအသငျးတှကေ ဘယျအသငျးတှလေဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ . . .
CSKA မျောစကို (2 games – 1 draw, 1 win for CSKA)
ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ ၁၉၉၂-၉၃ ဥရောပဖလား(ခနျြပီယံလိဂျ) ဒုတိယအဆငျ့မှာ CSKA မျောစကိုနဲ့ ဆုံတှခေဲ့ပွီး အိမျကှငျးမှာ (၂-၃)ဂိုးနဲ့ ရှုံး၊ အဝေးကှငျးမှာ (၁)ဂိုးစီ သရကေခြဲ့တယျ။ အဲဒီနောကျပိုငျး ဒီနှဈသငျး မဆုံတှတေ့ော့ဘဲ အခုအခြိနျပွနျတှရေ့ငျတော့ ဒီမှတျတမျးဆိုးကို ဘာစီလိုနာ ခြိုးဖွတျဖို့ အခှငျ့အရေးရှိပါလိမျ့မယျ။
နျောတငျဟမျဖျောရကျဈ (2 games, 1 draw, 1 win for Forest)
အခု အင်ျဂလနျလိဂျခနျြပီယံရှဈမှာ ရုနျးကနျနရေတဲ့ နျောတငျဟမျဖျောရကျဈအသငျးဟာ တဈခြိနျက ဥရောပမှာ ကွီးစိုးခဲ့ဖူးတဲ့ အသငျးတဈသငျးဆိုရငျ ပရိသတျတှေ အံ့သွသှားပါလိမျ့မယျ။ ဥရောပဖလား (ခနျြပီယံလိဂျ)ကို ၁၉၇၈-၇၉ ၊ ၁၉၇၉-၈၀ (၂)ရာသီဆကျ ရယူခဲ့ပွီး လီဗာပူးလျနောကျပိုငျး ဥရောပဖလားကို (၂)ကွိမျဆကျ ရယူခဲ့တဲ့ ဒုတိယအင်ျဂလနျအသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ ၁၉၈၀ ဥရောပစူပါဖလားပှဲအဖွဈ နျောတငျဟမျဖျောရကျဈနဲ့ ဆုံတှခေဲ့ပွီး အိမျကှငျးမှာ (၁)ဂိုးစီသရေ၊ အဝေးကှငျးမှာ (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။ နျောတငျဟမျဖျောရကျဈက အခုအခြိနျမှာ ခနျြပီယံလိဂျ ဝငျဖို့ နနေသောသာ၊ ပရီးမီးယားလိဂျတောငျ တနျးမတကျတာ ကွာပွီဖွဈလို့ ဒီမှတျတမျးဆိုးကို ဘာစီလိုနာ ရငျနာနာနဲ့ပဲ ဆုပျကိုငျထားရဦးမှာပါ။
ဒနျဒီးယူနိုကျတကျ (2 games,2wins for Dundee Utd)
တဈခြိနျက ဆဲလျတဈအသငျးနဲ့အတူ ဥရောပမှာ ခွစှောခဲ့တဲ့ စကော့တလနျကလပျ ဒနျဒီးယူနိုကျတကျအသငျးကလညျး ဘာစီလိုနာ မနိုငျဖူးသေးတဲ့အသငျးတဈသငျးပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက သူတို့နဲ့ (၄)ကွိမျအထိ ဆုံတှခေဲ့ပွီး သရတေောငျ မရှိဘဲ ပှဲတိုငျး ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။ ၁၉၆၆-၆၇ UEFA (ယူရိုပါလိဂျ) ဒုတိယအဆငျ့မှာ ဆုံတှခေဲ့တဲ့ ဒနျဒီးအသငျးက အိမျကှငျး (၂-ဝ)ဂိုး၊ အဝေးကှငျး (၁-၂)ဂိုးတှနေဲ့ အနိုငျရခဲ့တယျ။ ၁၉၈၆-၈၇ ရာသီ UEFA ကှာတားဖိုငျနယျမှာ ထပျတှတေ့ော့လညျး ဒနျဒီးက (၁-ဝ)၊ (၁-၂)ဂိုးတှနေဲ့ အနိုငျရခဲ့ပွနျတယျ။
အသငျးတဈသငျးဆိုတာ ဘယျလောကျပဲ ကွီးကယျြခမျးနားနပေါစေ၊ သူတို့ဟာ Unbeatable Team မဟုတျဘူးဆိုတာ ဒါက သကျသပေါပဲ။ ဒါကွောငျ့ Akhayar Sports ပရိသတျတှေ ဗဟုသုတရဖို့ ဒီ Article ကို ဖျောပွလိုကျတာပဲဖွဈပါတော့တယျ . . .